1 Zvino aya ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri vakauya kuIjipiti naJakobho; murume mumwe nomumwe akauya neimba yake:+ 2 Rubheni,+ Simiyoni,+ Revhi+ naJudha,+ 3 Isakari,+ Zebhuruni+ naBhenjamini,+ 4 Dhani+ naNaftari,+ Gadhi+ naAsheri.+ 5 Mweya yose yakabva muchiuno+ maJakobho yaisvika mweya makumi manomwe, asi Josefa akanga atova kuIjipiti.+ 6 Josefa akazofa,+ kubatanidza vanakomana vababa vake vose nechizvarwa ichocho chose. 7 Asi vanakomana vaIsraeri vakaberekana, vakatanga kuwanda; vakaramba vachiwanda, vachingova nesimba kwazvo, zvokuti vakazadza nyika yacho.+ 8 Kwapera nguva yakati, muIjipiti makamuka mumwe mambo mutsva akanga asingazivi Josefa.+ 9 Iye akati kuvanhu vake: “Tarirai! Vanhu vevanakomana vaIsraeri vawanda uye vava nesimba kutipfuura.+ 10 Uyai! Ngativarongerei zano,+ kuti varege kuwanda, uye kana hondo ikatiwira, vangazobatana nevaya vanotivenga, vakatirwisa, vakabuda munyika ino.” 11 Naizvozvo vakagadza vakuru vebasa rokumanikidzirwa kuti vavadzvinyirire pabasa ravo rinorema;+ uye vakavaka maguta anonzi Pitomu neRamusesi,+ kuti ave matura aFarao. 12 Asi zvavainyanya kuvadzvinyirira, ivo vaibva vanyanyawo kuwanda uye vainyanyawo kupararira kwose kwose, zvokuti ivo vakatya vanakomana vaIsraeri kwazvo.+ 13 Naizvozvo vaIjipiti vakaita kuti vanakomana vaIsraeri vave varanda vanodzvinyirirwa.+ 14 Vakaramba vachiita kuti upenyu hwavo huome nokuvaitisa basa rouranda rakaoma rokukanya dhaka+ nokugadzira zvidhinha, nokuita kuti vaite uranda hwemarudzi ose vachishanda muminda,+ ihwo uranda hwavo hwemarudzi ose hwavakavaitisa sevaranda vaidzvinyirirwa.+ 15 Mambo weIjipiti akazoti kuna vananyamukuta+ vechiHebheru, mumwe ainzi Shifra uye mumwe wacho ainzi Pua, 16 chokwadi akatosvika pakuti: “Pamunobatsira vakadzi vechiHebheru kusununguka, mukavaona vagere pachigaro chokusunungukira, kana ari mwanakomana, muurayei; asi kana ari mwanasikana, ngaararame.” 17 Zvisinei, vananyamukuta vacho vaitya Mwari wechokwadi,+ havana kuita sezvavakanga vaudzwa namambo weIjipiti,+ asi vaichengetedza vanakomana vari vapenyu.+ 18 Kwapera nguva yakati, mambo weIjipiti akashevedza vananyamukuta akati kwavari: “Makaitirei izvi, zvamakachengetedza vanakomana vari vapenyu?”+ 19 Vananyamukuta vakatiwo kuna Farao: “Nokuti vakadzi vechiHebheru havana kufanana nevakadzi vechiIjipiti. Nokuti vane simba, nyamukuta asati apinda mavanenge vari, ivo vanenge vatosununguka.” 20 Naizvozvo Mwari akaitira zvakanaka vananyamukuta vacho;+ vanhu vakaramba vachiwanda kwazvo uye vachiva nesimba kwazvo. 21 Zvino, nokuti vananyamukuta vakanga vatya Mwari wechokwadi, iye akazovapa mhuri.+ 22 Farao akazorayira vanhu vake vose, achiti: “Mukande vanakomana vose vanenge vachangoberekwa murwizi rwaNire, asi muchengetedze vanasikana vose vari vapenyu.”+